Shandisai Akanaka, Anopindura Mapeji Ekumhara muMaminetsi nemaReadPages
LeadPages ndiwo kumhara peji chikuva iyo inokutendera iwe kushambadza matemplate, anopindura ekumhara mapeji ane yavo-isina-kodhi, dhonza & donhedza muvaki mashoma mashoma. NeLeadPages, unogona kugadzira mapeji ekutengesa zviri nyore, magedhi anogamuchirwa, mapeji ekumhara, mapeji ekuvhura, kusvina mapeji, kutanga mapeji, ndinokutendai mapeji, pre-ngoro mapeji, upsell mapeji, pamusoro pangu mapeji, mapeji ekubvunzurudza uye nezvimwe ... kubva kumusoro. 200+ matemplate aripo. NeLeadPages, unogona:
Gadzira kuvepo kwako online - gadzira uye shambadza mapeji ewebhu anotaridzika mune imwe nyaya yemaminetsi.
Unganidza vatungamiri vanokwanisa -Kurisa chidimbu chega chega chemukati chaunoburitsa neshanduko-yakagadziridzwa mapeji, pop-ups, mbariro yekuzivisa, uye A / B bvunzo inoshandura yako webhu traffic kuita inotungamira uye vatengi.
Wedzera bhizinesi rako -Kungave uri kuunganidza mubhadharo kana kuronga kubvunzana, Leadpages inounza pamwechete maturusi aunoda kuti ukure bhizinesi rako kuti iwe ugone kunyatso DIY yako yedhijitari kushambadzira.
Mawebhusaiti, mapeji ekumhara, mabara ekuzivisa, & pop-ups -Gadzira kuvepo kwako kwepamhepo uye gadzira yako email runyorwa ine yakakwirira-inoshandura inopa uye opt-in mafomu.
Code-isina, dhonza uye donhedza muvaki -Gadzira uye shambadza nyanzvi-mhando, nhare-inopindura zvemukati mune imwe nyaya yemaminetsi pasina kubata chidimbu chekodhi.
Mobile-responsive templates -Leadpages inokwirisa template yega yega kuti itaridzike pane chero mudziyo, ingave desktop, piritsi, kana nharembozha.
SEO-inoshamwaridzika mapeji -Gadzirisa uye tarisisa kuti mapeji ako anotaridzika sei painjini dzekutsvaga. Seta meta tags yako (zita, tsananguro, uye mazwi akakosha), uye tarisisa peji rako munguva chaiyo.
Kubatanidzwa kwakasimba - Batanidza nematurusi aunotoshandisa: Mailchimp, Google Analytics, Infusionsoft, WordPress, nezvimwe! Kuwedzera 1000+ mapurogiramu kuburikidza neZapier.
Opt-in fomu kuvaka -Dhonza uye udonhedze fomu pane peji rewebhu kana pop-up, sarudza minda yako, gadzirisa dhizaini yako, uye fambisa inotungamira kune chero chishandiso kana app.
Real-time kutendeuka mazano - Ziva iyo yega chikuva chinokupa iwe matipi ekugadzirisa munguva chaiyo, kubatsira kufanotaura kuita kwepeji usati waburitsa.
Akarerutswa analytics -Ongorora zviri nyore kuita kwechokwadi-nguva yemapeji ako ekumhara uye Facebook ads, kuti iwe ugone kukwirisa sezvaunoenda.
A / B yokuedzwa -Gadzirisa mapeji ako ekumhara kune epamusoro shanduko nekumhanyisa isina muganho kupatsanura bvunzo-kusanganisira A / B bvunzo.
LeadPages parizvino inobatana nengoro dzekutenga, kushambadzira email, uye kushambadzira otomatiki mapuratifomu anosanganisira 1ShoppingCart, InfusionSoft, Mailchimp, Office Autopilot, GetResponse, Constant Contact, AWeber, GoToWebinar, 1AutomationWiz, iContact, SendReach, uye akawanda evamwe.
Mutengo unodhura chaizvo uye unosanganisira asingagumi mapeji ekumhara, kuwana kune ese matemplate, autoresponder kusangana, WordPress kusangana, kuwana kwavo kwakabatana chirongwa, uye chibvumirano chegore rino chakadzikiswa kubva kunyoreswa pamwedzi.
Tanga Yako LeadPages Yemahara Muedzo!
kuburitsa: Isu takafadzwa, isu takasaina uye takanyora iyi positi neyedu affiliate links!
Tags: 1AutomationWiz1ShoppingCartAWeberConstant ContactGetResponseaiwembeiContactInfusionsoftkumhara peji chikuvakumhara peji matemplatepamapejiLeadPagesmailchimpmobile kumhara mapejianodavirira mapeji ekumharaSendReach.Hwendefa kumhara mapeji
Aug 30, 2016 pa 8: 41 AM
Izvi zvakanaka. Inotaridzika seyakasimba inotungamira chizvarwa mhinduro. Ini ndinoshamisika kana ichabatana neyangu yekushambadzira otomatiki chikuva. Ini ndinoshandisa SendPulse uye haisi pane rondedzero iripo yekubatanidza. Kubatanidza kuburikidza neAPI ichokwadi asi haidiwe zvakanyanya.